Show All Most Popular Cutlery Seafood Special Menu Chicken Special Menu Other Special Menu Main Dish Fish Appetizer Vegetable Salad Thai Style Salad One Portion Soup Noodle Grilled Chicken Grilled Pork Grilled Fish & Seafood Grilled Beef & Mutton Grilled Vegetable
Seafood Special Menu
Chicken Special Menu
Other Special Menu
Grilled Beef & Mutton
Thanthumar Rd, Opposite Of Chanthar Condominium (Near Thuwanabumi Event Par, Yangon, MM Tamwe
Sunday11:15 - 22:30
Monday11:15 - 22:30
Tuesday11:15 - 22:30
Wednesday11:15 - 22:30
Thursday11:15 - 22:30
Friday11:15 - 22:30
Saturday11:15 - 22:30
Grilled Lady Finger (ရုံးပတေအကင်)
Grilled Chicken Tail (ကြက်ဆီဗူးကင်)
Grilled Quail Egg (ငုံးဥအကင်)
Grilled Chicken Wing (ကြက်တောင်ပံကင်)
Grilled Enoki Mushroom (အပ်မှိုအကင်)
Mala Sichuan Grilled Fish (စီချွမ်မာလာငါးကင် )
Grilled Chicken Gizzart (ကြက်မြစ်ကင်)
Grilled Pork Belly (ဝက်သုံးထပ်သားကင်)
Fried Water Cress (ကန်ဇွန်းပလိန်း)
Hot & Sour Seafood with Japanese Tofu (ပင်လယ်စာဂျပန်တိုဟူးအစပ်ချက်)
Assorted Fired Sea Food (ပင်လယ်စာအသားစုံကြော်)
Shanghai Style Fish Kaung Pao (ရှန်ဟိုင်းငါးကုန်းဘောင်)
Your Choice of Serbia or Seabass
Mala Sichuan (စီချွန်မာလာဟင်း)
Your Choice of Pork Belly or Shrimp
Chicken Curry with Wheat Beer (ကြက်သားဘီယာချက်)
Kachin Style Chicken Curry (ကြက်ကချင်ချက်)
White Meat Chicken Salad (ကြက်ဖြူသုပ်)
Cheesy Chicken Meatballs (ကြက်သားလုံးချိစ်)
3 Assorted Vegetable Fried with Oyster Sauce (သုံးမယ်ခရုဆီ)
Stire-fried Black Pepper Beef (အမဲသားငရုတ်ကောင်းမွှေး)
Rakhine Clay Pot (ရခိုင်မြေအိုး)
Your Choice of Burmese Chicken or Seafood
Pork Leg Stew (ဝက်လက်စတူး)
Hot & Sour Japanese Tofu (ဂျပန်တို့ဟူးချဉ်စပ်)
Japanese Tofu Clay Pot (ဂျပန်တို့ဟူးမြေအိုး)
Fried Japanese Tofu (ဂျပန်တို့ဟူးကြွပ်ကြော်)
Eel Curry (ငါးရှဉ့်ဟင်း)
Red Curry (အနီရောင်ဟင်း)
Your Choice of Chicken, Pork (or) Seafood
Phat Ka Paung (ဖက်ကဖေါင်း)
Your Choice of Chicken, Pork or Seafood.
Hot & Sour Assorted Seafood (ပင်လယ်စာအရက်သမားဟင်း)
Eel Hot Plate (ငါးရှဉ့်ဟော့ပလိတ်)
Steamed Glass Noodle with Shrimp (ပုဇွန်ပဲကြာဇံပေါင်း)
Spicy Dried & Steamed Quail (ငုံးပေါင်းခြောက်စပ်)
Thai Country Style Curry (ထိုင်းလယ်သမားဟင်း)
Your Choice of Chicken, Pork or Seafood
Margal Fish Tail Stew (ငါးကြင်းမြီးစတူး)
Fried Minced Ball (အသားစဉ်းကောလုံးကြော်)
Hot & Sour Curry (ချဉ်စပ်အနှစ်ဟင်း)
Clay Pot (မြေအိုးဟင်း)
Chinese Kung Pao (ကုန်းဘောင်ကြီးကြော်)
Seafood Hot Plate (ပင်လယ်စာဟော့ပလိပ်ဆေးဖက်ဝင်ဟင်း)
Kachin Style Mashed Fish (ကချင်ငါးထောင်း)
Phat Kaphrao with Deep Fried Century Egg (ခဖေါင်းဆေးဘဲဥကြွပ်ကြော်)
Grilled Snakehead Fish (ဆေးဖက်ဝင်ငါးရံ့ဝါးကျည်တောက်ကင်)
Steamed Fish with Lemon (ငါးသံပုရာပေါင်း)
Steamed Fish with Salted Plum (ငါးဆားငံစေ့ပေါင်း)
Steamed with Bamboo Shoot (ငါးမျှစ်ချဉ်ပေါင်း)
Deep Fried Fish (ငါးကောင်လုံးကြွပ်ကြော်)
Hot & Sour Steamed Fish (ငါးကောင်လုံးချဉ်စပ်)
Deep Fried Fish Sticks (ငါးအသားချောင်းကြော်)
Hong Kong Style Steamed Fish (ဟောင်ကောင်ငါးပောင်း)
Fried Sun-dried (နေတလှန်းကြော်)
Your Choice of Pork or Beef
Spicy Deep Fried Eel (ငါးရှဉ်ခြောက်စပ်)
Deep Fried Eel (ငါးရှဉ့်ကြွပ်ကြော်)
Deep Fried Squid (ပြည်ကြီးငါးကြွပ်ကြော်)
Fried Fish Cake (ယိုးဒယားငါးဖယ်ပြားကြော်)
Deep Fried Pork Ribs (ဝက်နံရိုးနုကြော်)
Your Choice of Vegan, Chicken or Pork
Fried Cashew Nuts (သီဟိုဠ်စေ့ကြော်)
Fried with Garlic (ကြက်သွန်ဖြူကြော်)
Salted Fried Burmese Chicken (အိမ်ကြက်ဆားကြော်)
Bite-sized Fried Burmese Chicken (ကြက်တုံးကြွပ်ကြော်)
Fried Vietnam Meatballs (ဗီယမ်နမ် အသားလုံးကြော်)
Fried Chicken Cartilage (ကြက်ဒူးဆစ်ကြော်)
Fried Duck Tongue (ဘဲလျှာကြွပ်ကြော်)
Fried Chicken Tail (ကြက်ဆီဗူးကြော်)
Fried Chicken Skin (ကြက်အရေခွံကြော်)
Fried Chicken Wing (ကြက်တောင်ပံကြော်)
Deep Fried Pork Belly (ဝက်သုံးထပ်သားကြွပ်ကြော်)
French Fries (အာလူးချောင်းကြော်)
Crispy Fish Crackers (ငါးမုန့်ကြော်)
Deep Fried Spicy & Sour Chicken (ကြက်ချဉ်ငံကြွပ်ကြော်)
Fried Water Cress & Straw Mushroom (မှိုကန်ဇွန်း)
Fried Cauliflower with Egg (ကြက်ဥပန်းပွင့်ဖြူကြော်)
Fried Cauliflower (ပန်းပွင့်ဖြူကြော်)
Fried Snow Peas (ရွှေပဲသီးကြော်)
Fried Kailan with Oyster Sauce (ကိုက်လန်ခရုဆီ)
Fried Sayote Leaves (ဂေါ်ရခါးညွှန့်ကြော်)
Fried Kailan with Pork Belly & Oyster Sauce (ဝက်ခေါက်ကိုက်လန်ခရုဆီ)
Red Curry Vegetables (အသီးအရွက်စုံအနီရောင်ဟင်း)
Fried Mustard Greens with Oyster Sauce (မုန်ညှင်းခရုဆီ)
Fried Assorted Vegetables (အသီးရွက်စုံကြော်)
Fried Conima Leaves with Egg (ကြက်ဥဆူးပုတ်ကြော်)
Fried Asparagus & Ginkgo (ကညွတ်နှစ်တစ်ရာ)
Minced Salad (စင်းကောသုပ်)
Thai Salad (ထိုင်းစတိုင်သုပ်)
Mixed Seafood Salad (ပင်လယ်စာအစုံသုပ်)
Yunum Chicken Salad (ယူနန်ကြက်သားသုပ်)
White Sea Weed Salad (ကျောက်ပွင့်သုပ်)
Squid Salad (ပြည်ကြီးငါးသုပ်)
Prawn Salad (ပုဇွန်သုပ်)
Your Choice of Raw or Boiled
Salad with Lemon (သံပုရာသုပ်)
Pig Shoulder Salad (ဝက်ဂုတ်သားကင်သုပ်)
Glass Noodle Salad (ပဲကြာဇံသုပ်)
Pig Head Salad (ဝက်ခေါင်းသုပ်)
Papaya Salad (သဘောင်္သီးထောင်း)
Your Choice of Urban or Rural.
Thai Style Assorted Fruits Salad (ယိုးဒယားသီးစုံထောင်း)
Glass Noodle Salad (ပဲကြာဇံထောင်း)
Your Choice of Plain, Chicken, Pork or Seafood
Fish with Papaya Salad (Serbia) လင်ဗန်းထောင်း (တီလားဗီးယား)
Thai Style Chicken Legs Salad (ကြက်ခြေထောက်ထောင်း)
Thai Style Bamboo Shoot Salad (မျှစ်ထောင်း)
Thai Style Sweet Corn Salad (ပြောင်းဖူးထောင်း)
Thai Style Squid Salad (ကင်းမွန်ထောင်း)
Thai Style Hot & Sour Chicken Salad (ကြက်ချဉ်စပ်ထောင်း)
Pounded Rice Noodle (ယိုးဒယားမုန့်တီထောင်း)
Thai Style Fish Paste (ထိုင်းငပိထောင်း)
Thai Style Mango Salad (သရက်သီးထောင်း)
Your Choice of Plain or Seafood
Thai Style Snow Mushroom Salad (ကျောက်ပွင့်ထောင်း)
Thai Style Hot & Sour Mushroom Salad (မှိုချဉ်စပ်ထောင်း)
Thai Style Pounded Potatoe (အာလူးထောင်း)
Thai Style Assorted Vegetables Salad (အသီးအရွက်စုံထောင်း)
Thai Style Green Bean Salad (ပဲသီးထောင်း)
Rice with Phat Kaphrao (ထမင်းဖြူခပေါင်း)
Rice with Spicy Curry (ထမင်းဖြူအသားအစပ်ချက်)
Rice with Sweet & Sour (ထမင်းဖြူချိုချဉ်)
Rice with Japanese Tofu & Oyster Sauce (ထမင်းဖြူဂျပန်တို့ဟူးခရုဆီ)
Rice with Thai Style Chilli Curry (ထမင်းဖြူယိုးဒယားငရုတ်နှစ်ချက်)
Rice with Hot & Sour (ထမင်းဖြူချဉ်စပ်)
Rice with Kung Pao (ထမင်းဖြူကုန်းဘောင်)
Steamed Rice with Vegetables (ထမင်းပေါင်း)
Thai Style Fried Rice (ထိုင်းထမင်းကြော်)
Chinese Style Fried Rice (တရုတ်ထမင်းကြော်)
Your Choice fo Chicken, Pork or Seafood
Thai Style Pashu Fried Rice (ပသျှူးထမင်းကြော်)
Tom Yum Soup (တုန်ယမ်းဟင်းရည်)
Thai Style Hot & Sour Pork Sparerib Soup (ဝက်နံရိုးချဉ်စပ်ဟင်းရည်)
Pork Sparerib Soup with Mustard Green (နံရိုးနုကြံမဆိုင်ဟင်းရည်)
Fish Head Soup (ငါးခေါင်းဟင်းရည်)
Assorted Vegetable Soup (၁၂ မျိူးဟင်းရည်)
Thai Style Hot & Sour Chicken Leg Soup (ကြက်ခြေထောက်ချဉ်စပ်ဟင်းရည်)
Chicken Soup with Dregea Volubilis Leaves (ကြက်ဂွေးတောက်ဟင်းရည်)
Fried Flat Rice Noodle (ဆန်ပြားကြော်)
Phat Thai Fried Noodle (ဖက်ထိုင်းခေါက်ဆွဲကြော်)
Chinese Style Fried Noodle (တရုတ်ခေါက်ဆွဲကြော်)
Fried Vermicelli (ကြာဇံကြော်)
Grilled Chicken Sausage (ကြက်အူချောင်းကင်)
Grilled Chicken Satay (ကြက်ဆာတေးကင်)
Grilled Chicken Levers (ကြက်သည်းကင်)
Grilled Chicken Thigh (ကြက်ပေါင်ကင်)
Grilled Enoki Mushroom Chicken Roll (ကြက်အပ်မှိုလ်ိပ်ကင်)
Grilled Chicken Head and Neck (ကြက်ခေါင်းလည်ပင်းကင်)
Grilled Pork Ribs (ဝက်နံရိုးကင်)
Grilled Pig Ears (ဝက်နားရွက်ကင်)
Grilled Satay (ဝက်ဆာတေးကင်)
Grilled Pork Tail (ဝက်မြီးကင်)
Grilled Pork Sausage (ဝက်အူချောင်းကင်)
Grilled Pork Tongue (ဝက်လျှာကင်)
Grilled Pork Intestine (ဝက်ချင်းတိုင်ကင်)
Grilled Pork Levers (ဝက်သည်းကင်)
Grilled Pork Loin (ဝက်လိုင်းသားကင်)
Grilled Pork Breast (ဝက်နို့အုံကင်)
Grilled Pork Belly (ဝက်ခေါက်ကင်)
Grilled Eel (ငါးရှဉ့်ကင်)
Grilled Octopuse (Large) ရေဘဝဲကင် (အကြီး)
Grilled Cuttlefish (ပြည်ကြီးငါးကင်)
Chaung Thar Grilled Prawn (ချောင်းသာပုဇွန်ကင်)
Grilled Tiger Prawn (ကျားပုဇွန်ကင်)
Grilled Clam (ဂုံးကင်)
Grilled Beef Tongue (အမဲလျှာကင်)
Grilled Mutton (ဆိတ်သားကင်)
Grilled Beef (အမဲသားကင်)
Grilled Quail (ငုံးကင်)
Grilled Corn (ပြောင်းဖူးအကင်)
Grilled Chicken Egg (ဆေးကြက်ဥကင်)
Grilled Tofu (တို့ဟူးအကင်)
Grilled Potato (အာလူးအကင်)
Grilled Ginkgo (နှစ်တရာအကင်)
Grilled Broccoli (ပန်းစိမ်းအကင်)
Grilled Garlic (ကြက်သွန်ဖြူအကင်)
Grilled Dried-Murrel-Fish (ငါးရံ့ခြောက်ကင်)
Grilled Kailan (ကိုက်လန်အကင်)
Grilled Bean Curd (ပဲပြားအကင်)
Grilled Eggplant (Whole) ခရမ်းသီးမီးဖုတ်ကင် (အလုံးလိုက်ရင်ကွဲကင်)
Grilled Lotus Root (ကြာစွယ်အကင်)
Grilled Leek (ဂျူးမြစ်အကင်)
Grilled Japanese Mushroom (ဂျပန်မှိုကင်)